Goobaha Khadka Tooska ah ee 'Icelandic Online Casino' - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
Loading ... Shuruucda khamaarka khadka tooska ah ee Iceland waxay mamnuucayaan shaqada hawlwadeennada ka shaqeeya khamaarka. Khamaarista waa ka mamnuuc waddanka gudihiisa, ha ahaato casinos-yada dhulka ka socda iyo internetka. Ka reeban sidoo kale waa ururo ay maamulaan jaamacadda Iceland. Arrinta sharciyeynta khamaarka noocan ah waxaa si isdaba joog ah u tixgelisay Dowladda. Si kastaba ha noqotee, wax isbeddel wanaagsan lagama filayo ciyaartoyda ilaa maanta. In kasta oo ay tahay in la ogaado in marin u helka goobaha maxalliga ah ee khamaarka khadka tooska ahi ay gacan ka geysan doonto in si dhakhso leh oo hufan looga takhaluso dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka ka jira. Waqtigan xaadirka ah, ciyaartoyda iyo sharadka khadka tooska ah ee taageerayaasha isboortiga ee Iceland waxay helayaan daldaloolo waxayna isticmaalaan adeegyada shirkadaha shisheeye.
Laga bilaabo Janaayo ee khamaarka 2017 ee hadda jira waa sharci darro Iceland, marka laga reebo bakhtiyaa-nasiibka iyo howlaha kale ee khamaarka ee ay bilaabeen ururada aan macaash doonka ahayn. Hay'adda kaliya ee maamulka idman ee hawsha khamaarka waa Jaamacadda Iceland Bakhtiyaa-nasiibka. Ururkani wuxuu leeyahay dhowr mashiinno naadi ah, oo la sharciyeeyay 1994, oo u dhow baararka iyo saldhigyada gaaska.
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Iceland, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta illaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada goobaha internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu fiican, gunooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Iceland
Sida laga soo xigtay daraasad dhowaan KeyToCasino site, ciyaarta khamaarka khadka tooska ah looma heli karo in ka badan 50% dhammaan dadweynaha sharciyada meeraha ee dalalkooda. Waxay noqotay in helitaanka khamaarka ee internetka uu aad ugu kala duwan yahay gobol ilaa gobol. Inkasta oo wadamada qaarkood laga mamnuucay dhammaan noocyada casinos-ka khadka tooska ah ee mamnuucista kale waxay khuseysaa oo keliya shirkadaha khamaarka maxalliga ah mana khuseyso shirkadaha shisheeye.
Cilmi baarista waxaa lagu sameeyay aruurinta iyo barashada sharciyada qaanuunka ku saleysan dhulka iyo internetka ee 225 dal oo adduunka ah iyo barashada ilaha macluumaadka 46 luqadood oo kala duwan. Ilo-wareedyada ayaa loo doortay kalsooni, sida goobaha ay ku shaqeeyaan hay'adaha dowladda hoose iyo warbaahinta ugu badan ee laga soo xigto gobolka. Sidaa darteed, sahanku wuxuu daboolay 95% dalalka, iyo 98% dadweynaha.
Marka laga hadlayo casinos-ka dhulka ku saleysan cilmi-baarista ayaa shaaca ka qaaday in ay xaddidan yihiin ama xitaa laga mamnuucay 74 dal, halka 151 xarumaha khamaarista ay gebi ahaanba sharci yihiin. Laakiin casinos online xaaladdu waa ka duwan tahay:
61 dal ayaa ogolaaday khamaarka internetka, laakiin kala badh ka mid ah qawaaniintu waxay khuseysaa oo keliya shirkadaha maxalliga ah. Sida ku xusan tuduca kore, sharciga dalalkan ma nidaaminayo ruqsad bixinta meelaha kale.
Marka maxaa ku soo food leh dadka caadiga ah, ee go’aansaday inay nasiibkooda ku tijaabiyaan shabakadda? Ciyaartoyda 25 dal waa inay si taxaddar leh u feejignaadaan oo ay ka digtoonaadaan waxa ay sameynayaan, maxaa yeelay waxay la kulmayaan mas'uuliyadda dambiyeed ee ciyaarta khadka tooska ah. 15 dal, waxaa laga yaabaa inay bixiso ciqaabta maamul, dadka degan 92 waddanna waxay u ciyaari karaan si xor ah - iyaga qatar uguma jiraan.
Sii wad inaad raacdo falanqeeyayaasha cilmi baarista ayaa darsay heshiisyada ku saabsan bixinta adeegyada 655 casino online ah oo loogu talagalay gobollada joogitaanka ee deganayaasha waa mamnuuc inay bixiyaan adeegyo. Wadamada Troika ee hogaaminaya mamnuucida ciyaarta ee muwaadiniinteeda waa sida soo socota: Mareykanka (72% mamnuucista casinos online), France (70%), Israel (54%). Saddexda waddan ee ugu hooseeya ee leh xaddidaadaha ugu hooseeya waxay gaarayaan Iceland (7%), New Zealand iyo Australia.
Si loo fahmo, maxay tahay aragtida ay masuuliyiintu ka qabaan khamaarka khadka tooska ah ee waddanka ku yaal iyo casinos badan oo khadka tooska ah laga mamnuuco inay ku ciyaaraan dadka deggan dalkan, daraasadda ayaa ka dhigtay qiimeyn 225 waddan iyo dhulal ah iyadoo lagu saleynayo qiyaasta helitaanka khamaarka ( Dhibcaha Helitaanka Khamaarka). Dhibcaha ugu badan ee ku saabsan miisaanka qiimeyntan ayaa ah 1,000 ka mid ah oo 500 ay ku xiran tahay boqolkiiba inta la heli karo ee loogu talagalay dadka deggan ee khadka tooska ah ee waddanka iyo 500 oo kale ayaa ah qaababka sharciyeynta gobolka ee ku-saleysan dhulka iyo casinos-ka internetka. Tan dambe waxaa ka mid ah dhinacyo ay ka mid yihiin dambiile / mas'uul mas'uuliyad maamul oo laga heli karo khamaarka khadka tooska ah iyo xawilaadaha lacagaha ee u dhexeeya casino iyo ciyaaryahanka.
Qiimeynta waxaa ugu sarreeyay Chile, Andorra iyo Venezuela, kuwaasoo helay 960 dhibcood. Qeybta hoose ee qiimeynta ayaa dejisay Faransiiska (412 dhibcood), Iran (407) iyo Mareykanka (311). Ruushka ayaa helay 686 dhibcood, isaga oo 173 ka galay liiska 225 dal.
nambarada gunooyinka casriga ah ee loo yaqaan '7 casino casino codes' lama bixiyo wax lacag ah